Yangon Aerodrome | Yangon Aerodrome
Thursday 21st June 2018 01:02
About Yangon Aerodrome
So far Yangon Aerodrome has created 14 blog entries.
ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ရှိ စားသောက် ဆိုင်များနှင့် ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်များ၏ ဇွန်လအထူး လျှော့ဈေးအစီအစဉ် များကို ရယူခံစားနိုင်ပါပြီ။
ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ရှိ စားသောက် ဆိုင်များနှင့် ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်များ၌ အထူးလျှော့ ဈေး အစီအစဉ်များ ရှိနေပါပြီ။
– Swarovksi တွင် US$ 250 အထက် ၀ယ်ယူ ပြီး အိတ်ဆောင်ကြည့်မှန် တစ်ခု လက်ဆောင်ရယူ နိုင်ပါပြီ။
– Aigner တွင် ပစ္စည်းဝယ်ယူတိုင်း bracelet တစ်ခု လက်ဆောင်ရယူနိုင်ပါပြီ။
– Desigual တွင် US $ 89 အထက် ၀ယ်ယူ တိုင်း foldable bag တစ်လုံး လက်ဆောင် ရယူနိုင် ပါပြီ။
– Diesel ၌ JoggJeans ၀ယ်ယူ၍ Travel kit လက်ဆောင်ရယူနိုင်ပါပြီ။
– Myanmar […]
By Yangon Aerodrome| 2018-06-02T13:39:42+00:00	June 2nd, 2018|
We said hello to our2millionth passenger of […]
Doing our part to promote tourism to Myanmar at Routes Asia 2018
Australia နိုင်ငံ၊ Brisbane မြို့တွင် မတ်လ ၁၈ ရက်မှ ၂၀ ရက်အထိ ကျင်းပခဲ့သည့် Routes Asia 2018 ကို ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်သည် မန္တလေးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် နှင့် Myanmar Tourism Marketing တို့နှင့် အတူ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
နိုင်ငံတကာအဆင့်မီဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရေးကြိုးစားနေမှုနှင့်အတူ ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သည် မြန်မာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းမြှင့် တင်ရေးအခန်းကဏ္ဍတွင်လည်း တက်ကြွစွာပါဝင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင် ရာလေဆိပ်အဖွဲ့သည် နိုင်ငံတ ကာမှ လေဆိပ်တာဝန်ရှိသူများ၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ၊ လေကြောင်းလိုင်း၂၃ လိုင်းတို့နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါ သည်။ ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သည် Routes Asia နှင့် World Routes တို့ကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်ကတည်းက စတင်တက်ရောက် ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ယခုတက်ရောက်မှုသည် ၉ ကြိမ်မြောက် ဖြစ်ပါသည်။
Routes Asia 2018 […]
By Yangon Aerodrome| 2018-03-29T18:22:25+00:00	March 29th, 2018|
ရန်ကုန် – ဖူးခက် ခရီးစဉ်သစ်အတွက် ခရီးသည် ၁၀၀ လိုက်ပါစီးနင်းနိုင်သည့် Embraer E190 / Boeing 737 – 800 NG အမျိုးအစား လေယာဉ်ကို အသုံးပြုထားပြီး ရန်ကုန် – ဖူးခက် – ရန်ကုန် အသွားအပြန်ခရီးစဉ်ဈေးနှုန်းကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၁၀ မှ စတင်ဝယ်ယူ စီးနင်းနိုင်ရန် မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်းမှ စီစဉ်ထားပါသည်။ အဆိုပါ ခရီးစဉ်သစ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးမြို့တော်ဖြစ် သည့် ရန်ကုန်မြို့နှင့် အက်ဒမန်ပင်လယ်ရှိ […]
ကြိုဆိုဂုဏ်ပြုခြင်းအထိမ်းအမှတ်အနေဖြင့် မလွင်မာမြင့်အား မြန်မာငွေကျပ်တစ်သန်းနှင့် နေပြည်တော်ရှိ Horizon Lakeview Hotel and Resortတွင် […]
Yangon International Airport (YIA) is now proudly on board asa[…]
Yangon International Airport facilitates special Lunar New Year charter flights from Xiamen, China operated by Myanmar Airways International
Part of YIA’s effort to develop the tourism industry in Myanmar
YANGON – 8 February 2018 – Yangon International Airport (YIA), the largest and busiest airport in Myanmar capable of handling 20 million passengers, today facilitated the first charter flight operations from Xiamen, China for this coming Lunar New Year season.
By Yangon Aerodrome| 2018-02-08T12:52:34+00:00	February 8th, 2018|
Appoints Mr José Angeja, IAP as new Chief Operating Officer
Tasked to maximize operational efficiency of YIA asahigh-performance airport
YANGON –5February 2018 – Yangon International Airport (YIA), the largest and busiest airport in
Myanmar andakey gateway into the country, welcomed 5.92 million passengers over the course of 2017.
Download Press […]
By Yangon Aerodrome| 2018-03-06T17:45:05+00:00	February 7th, 2018|
Exercise Falcon (Emergency Exercise 2017)
Yangon International Airport has completed its Emergency Exercise (Exercise Falcon) at 2.30pm today, which involved multiple stakeholders and tested various emergency and safety procedures.
ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ရှိ သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများနှင့် အရေးပေါ်လေ့ကျင့်ခန်းဆောင်ရွက်နေမှုသည် ယနေ့ ၀၂:၃၀ pm တွင် ပြီးစီးသွားပြီဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
[YANGON INTERNATIONAL AIRPORT EMERGENCY EXERCISE]
We can confirm that today, 23 November 2017, Nil Airlines Flight 123 traveling from Nay Pyi Taw […]
By Yangon Aerodrome| 2017-11-23T14:44:55+00:00	November 23rd, 2017|
YIA is built to handle up to 20 million passengers YANGON
14 November 2017 – Yangon International Airport (YIA), the largest and busiest airport in Myanmar, […]
By Yangon Aerodrome| 2018-03-06T17:48:02+00:00	November 15th, 2017|